‘जमघट, कार्यक्रम नगरौं, साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुने बानी बसालौं’ डा. राघबप्रसाद धिताल | Everest Times UK
चिनको वुहान प्रान्तबाट गत वर्ष सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वभरका मानिसलाई आतंकित बनाएको छ । चीनपछि यूरोपमा (हालसम्म) सबैभन्दा धेरै इटालीमा संक्रमण देखिएको छ । इटालीमा एक हजार भन्दा बढीको मृत्यू भैसकेको छ । बेलायतमा यो संक्रमण र मृत्युदर आक्रामकरुपमा बढ्दो छ । यसै सिलसिलामा बेलायतमा लामो समयदेखि कार्यरत एकजना चिकित्सक तथा वरिस्ठ जीपी डा. राघवप्रसाद धितालसँग नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम लुईटेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: